Haydarpaşa Bir Bütündür, Hukuksuz İhaleye Feda Edilemez | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Haydarpaşaသည်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးတရားမ ၀ င်တင်ဒါအတွက်မပူဇော်နိုင်ပါ
haydarpasa သည်တရားမ ၀ င်တင်ဒါတစ်ခုလုံးကိုမပူဇော်နိုင်ပါ
TCDD၊ Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာရုံများ၏နေရာများနှင့်အဆောက်အ ဦး များသည်ဟိုင်ဒရာပါစာကြွေးကြော်သံတွင်ပြည်သူလူထုပါ ၀ င်မှုအားဖြင့်တင်ဒါဆန္ဒပြမှုကိုတရားမ ၀ င်ဖယ်ရှားခြင်းအပါအ ၀ င်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတ Hasan Bektaşနှင့် Istanbul ဌာနခွဲအမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူHaydarpaşa Solidarity နှင့်နိုင်ငံသားများသည် 20 ၌ 2019 (13.00 Sunday) ၌ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ Haydarpaşa Gara လမ်းလျှောက်ကျင်းပခဲ့သည်။
“ Haydarpaşaဟာတစ်ခုလုံးပါပဲ။ TMMOB ဗိသုကာကုန်သည်များအသင်းဥက္ကChairman္ဌ Esin Köymenကတရားမ ၀ င်တင်ဒါကို ၀ ယ်ယူလို့မရပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္ကChairman္ဌ Hasan Bektaşကသူ၏ကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်; Bakanlığıသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးမြှို့နယ်ကဆုတ်ခွာသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မြှို့နယ်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါဘူး။ တင်ဒါကို Istanbul Metropolitan Municipality သို့မခေါ်ဘဲတံခါးပိတ်ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ဤတင်ဒါသည်အထက်မှကြားဝင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သင်အကြောင်းပြချက်များကိုကြည့်နိုင်ပါသလား? အပြန်အလှန်စကားလုံးကိုအတူတကွအသုံးမပြုဘဲ၊ ဒါပေမယ့်လှံဟာအိတ်ထဲမ ၀ င်ပါဘူး။ ဒီတင်ဒါကိုရပ်နားပါမယ် ပထမတစ်ခုမှာသင်နှင့်အတူဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယမှာ Kartal Courthouse တွင်တရားသူကြီးများဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုထင်ရှားလိမ့်မည် ..
ချစ်ခင်ရပါသောKadıköylüler, Üsküdarlı, Maltepeliler, Istanbul တွင်နေထိုင်သူများ!
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာဒေသများရှိအချို့နေရာများနှင့်၎င်းတို့အပေါ်တည်ဆောက်ထားသည့်အဆောက်အအုံများကို 2, etkinlik, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများဟု TCDD မှထုတ်ပေးသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော IMM မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအားတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းမခံရဘဲရေဖြင့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတင်ဒါလိပ်စာသို့တင်ပြခဲ့ပြီး Okcular Foundation ၏ဒါရိုက်တာဟောင်းကုမ္ပဏီ Hezarfen Consulting သို့တင်ပြခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ငါတို့သတ်မှတ်ချင်; Haydarpasa နှင့် Sirkeci ဘူတာနှင့် backcourt တစ်ခုလုံးသည်။ တစ်ထုံးစံအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်နှင့်အသုံးပြုမှုများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့မရှိမဖြစ် functions များ, ခွဲခြား, အပြတ်အတောက်, ငှားရမ်းရောင်းချမဟုတ်လမ်းမရှိသောရှိပါသည်။
ပိုအရေးကြီးတာကHaydarpaşaနှင့် Sirkeci Station, Istanbul ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများထဲကတစ်ခု, ငါတို့သူတို့ရဲ့အရေးပါမှု, သမာဓိနှင့် function ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စဉ်အနာဂတ်မျိုးဆက်များမှသယ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဤအရေးကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အညီကာကွယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တာ ၀ န်ခံမှုရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားများအပြင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၊ မြူနီစီပယ်နှင့် TCDD နှင့်ဆက်စပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာတာ ၀ န်များဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွို့၌ငလျင်တစ်ကြိမ်ထပ်အစစ်အမှန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မကျြနှာကို လာ. , ပင်လယ်ကိုနှင့် ဆက်စပ်. ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Sirkeci ရထားဘူတာ, Haydarpasa ရထားဘူတာ, ဆိပ်ကမ်း, ဆိပ်ခံတံတားနှင့်နောက်ကျော, ဖြစ်နိုင်သမျှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အထူးသဖြင့်လယ်ပြင်ငါတို့မွို့၏ချက်ချင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, လိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အရေးပါသောအရေးပါမှု, တကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ irrefutable အချက်အလက်များအဖြစ်ရှင်းပါတယ်။
ဤရှင်းလင်းသောအချက်နှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအများပြည်သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားဝင်တရားဝင်မှုမရှိဘဲတင်ဒါတင်သွင်းခြင်းဖြင့်အများပြည်သူသို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသင့်သောဤဒေသများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤမြို့အားအကြီးမားဆုံးသစ္စာဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်; အများပြည်သူ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားနှင့်လယ်ကွင်း၏အရေးကြီးသောအရေးပါမှုကိုသတိပြုမိသောကြောင့် Istanbul Metropolitan Municipality သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနအားတင်ဒါတင်ဒါတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှတားဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဖိတ်ကြား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကင်းပါးသောနိုင်ငံသားများဖြစ်သည့်ကာဒိုက်ကူရယ်၊ sksküdarlılar, Maltepeliler နှင့်İstanbullılarတို့သည် TCDD နှင့်သူတို့၏အာဏာပိုင်များအားထပ်မံကြေငြာမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လယ်ကွင်းများအားဖျက်သိမ်းပြီး Istanbul Metropolitan Municipality သို့မူလတန်းနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်ဟူသောအခြေအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်တောင်းဆိုသည်။
နိုင်ပါစေဟိုင်ဒရာဆာနှင့် Sirkeci တင်ဒါများကိုဖျက်သိမ်းပါ။
ဒေသများ; ၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသောအခြေအနေဖြင့် Istanbul Metropolitan Municipality သို့လွှဲပြောင်းပါ။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအစည်းအဝေးတွင်တွေ့ Channel ကိုရာဇဝတ်မှု! 01 / 06 / 2018 AKP’nin ‘çılgın proje’ olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesine ilişkin düzenlenen halkın katılımı toplantısına yurttaşların ve meslek odalarının temsilcilerinin alınmamasına ilişkin yapılan suç duyurusunu savcılık işleme koymadı. İstanbul’da4ilçe sınırında…
Alanya စျေး Tariff ဥပဒေမဲ့ Ropeway 12 / 07 / 2019 မတန်တဆရထားလမ်းစျေးနှုန်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို Alanya မြူနီစီပယ်ကောင်စီမှဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကသတ်မှတ်ခဲ့စဉ်က၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ စာချုပ်ဟောင်းကိုမပြောင်းလဲပါက ropeway စျေးနှုန်းသည် 14,4-21,6 TL အကြားရှိလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်…
မီးရထားလက်မခံနိုင်လျစ်လျူရှု! 26 / 11 / 2012 Demiryolu Gözardı Edilemez! Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ulaşımda Demiryolu’nun önemine dikkat çekerek, Demiryolu nun Giresun'a ve dolayısıyla Doğu Karadeniz bölümüne ulaşmasıyla ulusal boyutta sağlanan…
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာလေလံ Done! .. သူကားအဘယ်သူ Verdi တင်ဒါကမ်းလှမ်းချက်ကြည့်ပါ .. 04 / 10 / 2019 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ IMM ၏ပါ ၀ င်မှုအား“ အဟန့်အတား” ဟုပြောခြင်းအားဖြင့်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်သောHaydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာများရှိအချို့နေရာများကိုငှားရမ်းရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ တင်ဒါအပြီးတွင် IMM နှင့် Hezarfen Aviation တို့ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ နူးညံ့သော ...
ဧလိယသည်သကြား: YHT များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Feda Olsun 03 / 12 / 2012 မနေ့က AKP Provincial Centre ရှိ Duty dünမှ Millet ဒု - ဥက္ကwas္ဌဖြစ်သူ Ilyas Seker ကမြန်နှုန်းမြင့်ရထား YHT လမ်းဖောက်လုပ်ရန်Muşukiyeတွင်တည်ထောင်မည့်သရဖူကျောက်မီးသွေးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ Şeker“ YHT စီမံကိန်းကအများကြီးပါပဲ။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအစည်းအဝေးတွင်တွေ့ Channel ကိုရာဇဝတ်မှု!
ဧလိယသည်သကြား: YHT များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Feda Olsun
YHT ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဘို့ယဇ်ပူဇော်ကြ၏ရ: သကြား AK ပါတီလက်ထောက်
ငါနူးညံ့ cable ကိုကားတစ်စီးကို exit လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် | Giresun